Ronald Koeman oo xiddigaha Kooxdiisa Barcelona ku wargeliyey laacibka noqonaya saxiixiisa saddexaad ee weyn oo imaanaya Camp Nou – Gool FM
(Barcelona) 15 Juun 2021. Tababare Ronald Koeman ayaa la soo warinayaa inuu xiddigaha Kooxdiisa Barcelona ku wargeliyey laacibka noqonaya saxiixiisa saddexaad ee weyn oo dhowaan imaanaya garoonka Camp Nou.
Barcelona ayaa ku rajo weyn inay Memphis Depay kala soo wareegto kooxda Lyon, taasoo ka dhigeysa imaatinkiisa saxiixii saddexaad ee weyn oo ku soo biira ilaa iyo haatan xagaagan.
Kooxda Barcelona ayaa gudbinaysa dalabkeedii ugu dambeeyey ee heshiiska ay kula soo wareegeyso Memphis Depay, sida ay sheegayaan wararka laga helayo Faransiiska.
Xiddiga kooxda Lyon ayaa ku dhawaaday inuu u dhaqaaqo garoonka Camp Nou sanad ka hor, iyadoo waqtigiisii horyaalka Ligue 1 uu haatan dhammaaday, isla markaana u dhaqaaqistiisa Catalonia ayaa ugu dambeyntii qarka u saaran inay suuro-gasho.
Depay ayaa dad badan u qaateen inuusan qaab ciyaareedkiisu wanaagsanayn kaddib markii uu ka soo dhaqaaqay Manchester United, iyadoo ciyaaryahanka reer Holland uu 18 bilood oo kaliya ku qaatay garoonka Old Trafford.
Laakiin tan iyo markii uu dib ugu dhisay xirfaddiisa kooxda Lyon, waxaa soo damaaciyey kooxo badan adeeggiisa, isagoo dhanka weerarka horumar badan ka sameeyey.
Barcelona ayaa dooneysay inay la soo wareegto Depay sanad ka hor laakiin, dhibaatada Korona Fayras ayaa saameyn ku yeelatay dhaqaalahooda, isla markaana Lyon ma aysan dooneyn inay iibiso, taasoo ugu dambeyntii seejisay inay gacanta ku dhigaan.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira rajo ah inuu u dhaqaaqi doono horyaallada La Liga iyo kooxda Barcelona wixii ka dambeeya tartanka koobka qarammada Yurub ee Euro 2020 oo uu xulkiisa Holland kala qeyb-galayo.
Haatan Jariiradda Mundo Deportivo waxa ay warinaysaa in Barcelona ay dalabkii ugu dambeeyey ka gudbinayso Depay, iyadoo Weeraryahankan uu noqonayo kii saddexaad ee weyn oo xagaagan yimaada kooxda Barca kaddib Sergio Aguero iyo Eric Garcia.